Appboy: Nzwisisa, Bvunzo uye Bata Vashandisi Vemafoni | Martech Zone
China, November 7, 2013 Chitatu, July 23, 2014 Douglas Karr
Iyo mobile ecosystem yakaputika kusvika anopfuura mamirioni 1 maapplication mumakore matatu apfuura. Makambani ari kunetsekana nemutengo wakakwira wekushandisa wevashandisi uye nemitengo yakaderera yekuchengetedza. Asingasvike makumi matanhatu muzana emafoni maapplication anopa yakanak kudzoka pane investment.
Appboy mhinduro inofambiswa nedata inoita kuti vashambadzi veapplication mafoni vagadzire profiles vashandisi pane avo vateereri mbozhanhare, uyezve nekuvapa simba nesutu yezvishambadziro zvemuchina:
Push Notifications ipa ruzivo rwakakodzera, rwakakodzera nguva kune yako skrini yemusha yemushandisi (kunyangwe kana iyo app isiri kushanda), ichiwedzera kubatanidzwa ne30-60%.
News Feeds gadzira nzira yekuburitsa zvidimbu zvakakura zvemukati mune yakaderedzwa kadhi kuona pasina zvipingaidzo zvePush notices uye mukati-app meseji.
In-app mameseji ipa chiteshi chekutaurirana kusundira zviziviso, asi mukati meapp uye nekuchinjika kukuru.
enamel inopa nzira yekutaurirana nevashandisi kupfuura yako mobile application. Email yakavhurika mitengo pane nhare yadarika desktop, zvakakosha kuti email ive chikamu chenyu mizhinji-chiteshi musanganiswa.
In-app mhinduro kuburikidza nemafomu uye rutsigiro rwevatengi runopa mukana kune iwo ma profiles evashandisi vane nyaya uye nekukurumidza kugadzirisa matambudziko kudzikisira isina kunaka mashopu ezvitoro. Kubatanidzwa nezvirongwa zvechitatu-bato senge Zendesk, Salesforce Desk.com uye UserVoice inowanikwawo.
Segmentation - tarisa uye gadzira zvemukati zvakanangana nezvinodiwa nemushandisi.
Kuongorora Kwakawanda - kugona kuyedza akasiyana matanhatu pane akawanda mameseji chiteshi anosanganisira e-app mameseji, email uye Push notices.
Nyanzvi yevashandi vevashandi inowanikwa zvakare kubatsira kuona kubudirira, kutyaira mushanduko wekushandura mitengo inogara ichidarika makumi matatu muzana. Appboy akaona kukura kwe30% mumwedzi mipfumbamwe yapfuura uye ikozvino kuverenga kupfuura vatengi ve400, kusanganisira Zvinyorwa +, Urban Outfitters, NSG, SnapSnap, Bloomberg, shepi uye Vadivelu Comedy PopSci.
Tags: mukomanageo-nzvimbokunongedzera geogeotargetingYeMahara neThebhu Kushambadziranharembozha app mutengi rutsigiromobile app mesejinharembozha emailmobile marketingnhare yekushambadzira michinanhare yakawanda-chiteshinharembozha feedmobile kusunda noticesmultivariate kuyedzadzikisa notices
Nov 7, 2013 na6:34 PM
Chikuva chinonakidza. Ndatenda nechisumo ichi, ndichada kunyatsodzidza izvi pamberi pechikumbiro.